XOG: Fahad Yaasiin & Farmaajo Oo Ciidamo Hab Beeleed U Abaabulan Qoranaya & Dalalka Loo Dirayo Oo La Ogaaday -News and information about Somalia
Home Warkii XOG: Fahad Yaasiin & Farmaajo Oo Ciidamo Hab Beeleed U Abaabulan Qoranaya...
XOG: Fahad Yaasiin & Farmaajo Oo Ciidamo Hab Beeleed U Abaabulan Qoranaya & Dalalka Loo Dirayo Oo La Ogaaday
Taliyaha Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa qoranaya ciidamo dhalinyaro ah,kuwaasi oo loogu talagalay iney qabtaan howlo gaar ah oo u cayiman Fahad Yaasiin iyo saaxiibadii ugu sareeyo dalka.
Illo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa inoo sheegay in howsha qorista ay ka socoto Taliska Nabad Sugida ee Habar Khadiijo oo ku yaalo degmada Shibis ee Gobolka Banaadir,halkaas oo si weyn loo ilaaliyo.
Walaacaan oo horay u jiray ayaa soo shaac baxay billihii ugu dambeeyay,waxaana sida wararka aan ku heleyno dhalinyarada la qorayo ay u badan yihiin hal beel,kuwaas oo la doonayo in loo diro shaqo aan Qaranku lahayn oo ku qotonto dano gaar ah.
Sida aan xogta ku helnayo,dalalka Qadar iyo Eriteriya oo saaxiibo dhow la ah Madaxda Villa Soomaaliya ayaa ciidamadan cusub lagu soo tababarayaa,waxaana tababarkooda isugu jiraa dhowr nuuc oo arrimaha Sirdoonka u badan,sida aan warku ku ogaanay.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo Muqdisho kula hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inuu cabsi weyn ka qabo ciidamo habeen la qorayo oo loo dirayo Labo dal,wuxuuna hadalkiisa intaas ku darayo in Dowladda Federaalka Soomaaliya banaanka keento oo ay cadeyso ciidamadaas.
Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo Saaxiib dhow la ah Dowladda Qadar ayaa mashruucaan hormuud ka ah lamana oga ujeedka dhabta ah uu ka leeyahay ciidamo dhalinyaro u badan oo qandaraaska looga qaaday labo Dowladood.
Previous articleC/raxmaan C/shakuur oo lagu casuumay Dood uu soo qaban qaabiyay Aqalka Chatham House
Next articleDHAGEYSO: Khayre oo weerar culus ku qaaday dhammaan madaxdii talada kaga horreysay
Ciidamo Ka Wada Tirsan Dowladda Oo Ku Dagaalamay Dhuusamareeb